Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Croatian Sheekada Dhalashada Marcelo Brozovic oo lagu daray Xaqiiqda Untold Biography
Markii uu bilaabay, waxaa lagu naaneysaa “Yaxaaska". Waxaan ku siinaynaa dabool buuxa oo ah Taariikhda Caruurnimada Marcelo Brozovic, Taariikh nololeedka, Xaqiiqda Qoyska, Waalidiin, Nolosha Hore iyo dhacdooyinka kale ee xuska ah laga soo bilaabo markuu ilmuhu ahaa ilaa markii uu caan noqday.
Nolosha iyo koritaanka Marcelo Brozovic Sawirrada Sawirrada: Instagram, Goal iyo ESPN.
Haa, qof walba wuu ogyahay Brozovic inuu yahay khad dhexe oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya qaabkeenna Marcelo Brozovic's Biography oo aad u xiiso badan. Hadda, iyada oo aan la sii amba qaadin, aynu bilowno
Marcelo Brozovic Sheekada Carruurnimada:
In lagu bilaabo, qadka dhexe guud - Marcelo Brozović wuxuu ku dhashay maalintii 16aad ee Nofeembar 1992 magaalada Zagreb ee Croatia. Wuxuu ku dhashay hooyadiis, Sanja Brozović iyo aabihiis, Ivan Brozović.
Sawirka Carruurnimada Marcelo Brozovic. Tani waa tan ugu fiican ee aan ka heli karno noloshiisa ugu horreysa. Dhibcaha: Picuki
Meesha uu ku dhashay Marcelo Zagreb, waxaa badanaa loo yaqaan “magaalada jiidooyinka". Magaaladu waa masduulax ku xidhan oo ay ka buuxaan waxyaalo gurguurta iyo dhagaxyo sanamyo abeeso leh. Sida laga soo xigtay TheLocal, Zagreb waxaa lagu xantaa in ay leedahay boqoradda caanka ah ee nacas ah ee caanka ah ee khuraafaadka Griiga- “Medusa"Oo kuwa aad ugu dhex aasnay ​​godadka. Hoos waxaa ku yaal sawirka mid ka mid ah waalidiinta Marcelo Brozovic - aabihiis umuuqda mid u eg, Ivan.
La kulan mid ka mid ah waalidiinta Marcelo Brozovic. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
In kasta oo Marcelo uu u muuqday muuqaal aan wax badan ka sheegin dhalashadiisa iyo asalkiisa qoys, haddana waxaan xaqiiqsan nahay inuu isagu yahay wadani Croatian ah Xaqiiqdii wuxuu ku barbaaray tuulada Okuje oo u dhaw Velika Gorica oo ku taal Zagreb halkaas oo uu ku soo barbaaray walaalkiis, Patrick Brozović iyo walaasha, Ema Brozovic.
Wuxuu ku soo barbaaray tuulo ku taal Zagreb. Dhibcaha Sawirka: Atlas World iyo Instagram.
Ku barbaarinta tuulada, waxay horeyba u ahayd hubaal in Marcelo uu mustaqbal wanaagsan ku yeelan doono kubbadda cagta. Tan ayaa inta badan sabab u ahayd xaqiiqda ah in aabihii Marcelo uu ku weynaa tababarka wiilashiisa sida ugu fiican ee loo ciyaaro ciyaarta.
Marcelo Brozovic Sanadaha Hore:
Markii uu Marcelo da'diisu ahayd 9-10 sano jir, wuxuu ku soo biiray nidaamka dhalinyarada ee naadiga Hrvatski Dragovoljac ee xaafada Novi Zagreb isaga oo doonaya in uu la kulmo kubada cagta tartan rasmi ah.
9-10-sano jir wuxuu caan ku ahaa kubada cagta Hrvatski Dragovoljac. Astaanta Muuqaalka: Instagram iyo Hrvatski.
Intii aan joogay Dragovoljac, muddo dheer uma aysan qaadanin maamulayaasha kooxda in ay ogaadaan in Marcelo uu dhif u yahay daryeelkooda maxaa yeelay wuxuu ahaa mid farsamo ahaan wanaagsan wuxuuna ciyaari karaa seddex kulan oo isku xigta!
Marcelo Brozovic Nolosha Xannaano Hore:
Markaa, maahan wax la yaab leh in Marcelo uu duubay xawaaraha xawaaraha Dragovoljac ilaa heerkiisii ​​ugu horreeyay ee uu kooxda ka soo muuqday bishii July 2010. waxaa sharci ahaan loo arkay inuu yahay qof weyn, wax badan lagama fileynin isaga.
Xaqiiqdii, isagu ma uusan aheyn la yaabka caruurta nidaamka naadiga ee uu ka qalin jabiyay. Sidaas darteed, wuxuu si farxad leh u qaatay kubbad-koox heerka koowaad si xawaare ah oo uu ku dhaliyay goolashiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed bishii Maarso 2011 (ku dhawaad ​​sannad kadib markii ugu horreysay)!
Marcelo Brozovic Biography- Wadadiisii ​​Sheekada Caanka:
Bedelaada mustaqbalkiisa Marcelo wuxuu yimid bartamihii July 2011 markii uu ku soo biiray NK Lokomotiva ka dib markii Dragovoljac uu u dhacay heerka labaad. Waxay ahayd Lokomotiva inuu khadka dhexe si tartiib tartiib ah qaabkiisa u wanaajiyo. Xitaa wuxuu dhaliyay afar jeer si kooxda looga caawiyo inay ku guuleysato booska dhexe ee miiska!
Midkoodna ma uusan aheyn goob fagaare ah Dinamo Zagreb, koox uu ku biiray August 2012 ka dib markii uu ku dhameystay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa ee Lokomotiva. Ma ogtahay in Marcelo uu si cajiib ah ku dhammeystay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee Dinamo isagoo ka caawiyay kooxda inay ku guuleysato horyaalka? 'The Blues' xitaa waxay gaartay wareegii labaad ee 2012 - 13 Croatian Football Cup waxayna ka dhigtay inay u soo baxdo wareega group-yada Champions League.
Eeg cidda gacan ka geysatay beddelidda nasiibkii Dinamo Zagreb muddo aan dheereyn ka dib markii uu kooxda ku soo biiray 2012. Sawirka Muuqaalka: Instagram.
Marcelo Brozovic Biography- Ujeeddadiisi Sheekadii Caannimada:
Farxadda xubnaha qoyskiisa Marcelo Brozovic ma oga wax xaddid ah waqtigaas oo ugu dambeyntiina xaqiijiyey fiisayaashii uu ugu ciyaari lahaa Yurub. Marka la fiiriyo rikoorka cajiibka ah ee Marcelo ee Dinamo, kooxda reer Talyaani ee Inter Milan kama aysan jirin wax cabsi ah oo ku saabsan inay amaah kula soo wareegaan - 2015 - si ay uga caawiyaan xoojinta qadka dhexe ee kooxda. Isagoo xiran lambarka 77, Marcelo wuxuu cadeeyay inuu yahay hanti qaali ah taasoo ka dhigtay Nerazzurri miiska inuu noqdo heshiis joogto ah ka hor xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay.
Xiddiga qadka dhexe ayaa heystay sannadihii u dambeeyay Inter Milan inay lacagtooda ku hesho isagoo dhaliyay goolal muhiim ah isla markaana ka caawiyay Nerazzurri inay ku dhameysato finalka Coppa Italia. Maxaa intaa ka badan? Waa ciyaaryahan fure u ah waxa ay ku kacayso inuu tababare sameeyo - Antonio Conte gaaro himiladiisa ah soo afjarida awooda Juventus ee Serie A. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Waa wax aan la qiyaasi karin inay tahay inuu qadka dhexe qiimo u leeyahay Inter Milan oo uu ka caawiyay xaqiijinta guulaha muhiimka ah. Dhibcaha Sawirka: DailyMail.
Marcelo Brozovic Gabadha, Xaaska, iyo Ilmaha:
Marka laga soo tago noloshiisa nololeed ee Marcelo, wuxuu leeyahay mid ka mid ah nolosha xiriirka ugu deggan ee ka dhexeeya ciyaartoydii kubada cagta ee ka ganacsada kubada cagta Talyaaniga. Thanks to saaxiibkiis wuxuu u jeestay xaaskiisa Sivija Lihtar. Wax badan lagama oga goorta ay Sivija noqotay gabadha Marcelo. Si kastaba ha noqotee, jiritaankeeda nolosha qadka dhexe ayaa xasillooni badan ku keentay mustaqbalkiisa.
Sawir iska tuurida Marcelo Brozivic iyo xaaskiisa mustaqbalka Sivija Lihtar inta lagu gudajiray sannadihii ugu horeeyey ee shukaansiga. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
La yaab ma leh in khadka dhexe uu naag ka guursaday oo ku raaxaysto guurka. Labada isqaba waxay leeyihiin labo caruur ah waqtiga qorista. Waxay ka mid yihiin gabadh - Aurora (oo dhashay 2016) iyo wiil - Rafael (dhashay 2019). Hoos waxaa ku yaal sawir qurxoon oo ah xaaska Marcelo Brozovic iyo carruurtooda markay u dabaaldegayaan kirismaska ​​sannadka 2019.
Sawir qurxoon oo ah Marcelo Brozovic xaaskiisa iyo carruurtooda markay u dabaaldegayaan kirismaska ​​sannadka 2019. Dhibcaha: Instagram.
Marcelo Brozovic Nolosha Qoyska:
Waa shaki la'aan in qof walbaa leeyahay reer oo ay yihiin waxyaalaha ugu qaalisan nolosha. Waxaan kuu soo qaadaneynaa xaqiiqooyin dheeri ah oo ku saabsan xubnaha qoyska Marcelo Brozovic oo ka soo bilaabay waalidkiis.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan aabaha Marcelo Brozovic:
Ivan Brozović waa aabaha qadka dhexe ee cajiibka ah. Waa nin xiiseeya kubada cagta kaasoo hubiya in xubnaha qoyskiisa iyo dadka ay is yaqaannaan ay sidoo kale galaan ciyaaraha. Xaqiiqdii, Ivan wuxuu tababare u ahaa Marcelo inta lagu gudajiray qadka dhexe noloshiisa wuxuuna sii watay inuu hubiyo in horumarkiisii ​​ugu sareeyay ee kubada cagta uu noqday mid run ah.
Marcelo Brozovic iyo aabihiis Ivan wax yar ka dib markii uu ku biiray kooxda Inter Milan. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan Marcelo Brozovic hooyadeed:
Sanja Brozović waa hooyada jacaylka iyo taageerada ee khadka dhexe. Waxay ahayd tii ugu farxadda badneyd ciyaar kasta oo uu Marcelo ciyaaray intii uu ku jiray kubbada cagta. Waxay xitaa ka caawisay ninkeeda keydinta diiwaannada bilowga ugu hooseeya ee Marcelo goolashiisa si uu u caawiyo. Waa sababahan dartood in Marcelo uu jecel yahay waalidkiis oo uu ku hayo ixtiraam sare ilaa taariikhda.
Ku saabsan Walaalaha Marcelo Brozovic:
Marcelo wuxuu ku koray isagoo leh labo walaalo ah oo ku dhex dhashay dabaqadda qoyska dabaqadda dhexe ee Tuulada Okuje ee Zagreb. Waxa ku jira walaashiisa yar ee la yaqaan, Ema Brozovic iyo walaalkiis, Patrick Brozovic. Si la mid ah Marcelo, Patrick wuxuu ku qaatay mustaqbal ballaadhan oo kubbadda cagta ah laakiin uma lahayn adkaysashada inuu kor uga soo kaco kubbadda cagta dhalinyarada. Si kastaba ha noqotee, wuxuu taageere u yahay xirfadiisa Marcelo isla markaana ku faanaa meelaha sare ee khadka dhexe uu gaadhay.
Miyaad arki kartaa isku ekaanshaha u dhexeeya labada walaalo? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Waxyaabaha ku saabsan Marcelo Brozovic:
Ka fog waaliddiinta Marcelo Brozovic iyo walaalaha, wax badan lagama garanayo xididdada qadka dhexe ee qoyskiisa ama abtirsiin ahaan, gaar ahaan hooyadiis iyo ayeeyadood. Si la mid ah ayaa looga gudbayaa guud ahaan bahda dhaxeyaasha, adeeradeyaasha iyo adeeradooda. Sidoo kale, abtirsiisyadiisa iyo adeerkiis lama yaqaan waqtiga la qorayo taariikh nololeedkan.
Marcelo Brozovic Xaqiiqda Nolosha Qofka:
Marka laga soo tago qaybtiisa kubada cagta, Marcelo Brozovic wuxuu leeyahay hal shaqsiyad weyn oo ku dhex milmaya astaamaha xariifka ah, dareenka leh, deeqsinimada leh iyo howlkarnimada calaamadaha loo yaqaan 'Scorpio zodiac' oo leh kalgacal iyo qadarin shaqsiyadeed.
Intaas waxaa sii dheer, dhif iyo naadir ayuu shaaca ka qaadayaa xaqiiqadiisa ku saabsan noloshiisa gaarka ah iyo tan shaqsiyadeed inta howlaha ka socda hiwaayadaha uu xiiseeyo iyo waxyaabaha ay xiiseeyaan ay ka mid yihiin ciyaarista teniska, la socoshada ciyaaraha kubbadda koleyga, dabaasha iyo waqti fiican la qaadashada qoyskiisa iyo saaxiibadiisa.
Cayaaraha kubbada cagta ayaa dhif ah ciyaari kara tennis laakiin Marcelo wuu ciyaaraa! Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Marcelo Brozovic Xaqiiqda Nolosha:
Qiimaha saafiga ah ee Marcelo Brozovic ayaa lagu qiyaasay inuu ka badan yahay $ 15 milyan marka loo eego Febraayo 2020. Ku biirinta durdurrada sida dhaqsaha leh ee saafiga ah ayaa ah mushaharka iyo mushaarka uu ka helo kubada cagta. Intaas waxaa sii dheer, oggolaanshuhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan qaabaynta hab dhaqankiisa kharash-garaynta.
Sidaas darteed, Xiddiga qadka dhexe uma baahna inuu jebiyo bangiyada si uu ugu noolaado nolol raaxo leh. Tilmaamayaasha nolosha wanaagsan ee Marcelo waa baabuurta qalaad ee uu raaco. Waxa kale oo uu ku nool yahay guryo waaween iyo guryo u dhigma isbeddelka joogtada ah ee dhadhanka guryeynta.
Gawaaridan qaaliga ah ee 'Mercedes jeep' waa mid ka mid ah safarradiisa badan ee qaaliga ah. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Marcelo Brozovic Xaqiiqooyinka:
Si loo soo duubo sheeko carruurnimadeena Marcelo Brozovic iyo taariikh nololeedkeeda, halkan waxaa ah wax aan badneyn oo la ogyahay ama xaqiiqooyin aan la shaacin oo ku saabsan qadka dhexe.
Sida wakhtigii qorista, qandaraaska ciyaaryahanka heerka caalami ee xulka Croatia uu la leeyahay Inter Milan ayaa ka dhigeysa inuu kasbado mushahar qaali ah 6.4 Milyan Euro (5.5 Million Pound) sanadkiiba. Adoo jeex jeexay Marcelo Brozovic mushaharkiisa, waxaan leenahay burburka soo socda.
Mushaharka Marcelo Brozovic ee Euro (€)
Mushaharka Marcelo Brozovic ee Pound (£)
Dakhliga sanadkii € 6,400,000 £ 5,500,000
Daqliga bishiiba € 533,333,3 £ 458,333.3
Daqliga usbuucii € 123,076.9 £ 105,769.2
Daqli maalintiiba € 17,534.25 £ 15,068.49
Dakhliga halkii saac € 730.6 £ 627.85
Daqliga daqiiqaddii € 12.18 £ 10.46
Daqliga per Second € 0.20 £ 0.17
Waxaan kor u qaadnay mushaharka Marcelo Brozovic daqiiqad kasta, waxaan u jajabnay waxa uu kasbado halkii ilbiriqsi kasta. Hoos ka arag;
Tani waa inta uu soo kordhiyay Marcelo Brozovic tan iyo markii aad bilowdey daawashada bogga.
Haddii waxa aad kor ku aragto wali akhrinayso (0), markaa waxay ka dhigan tahay inaad arkaysid bogga AMP. Hadda Riix HALKAN si loo arko mushaarkiisa oo kordhaya ilbiriqsiyo. Ma ogeyd?… Waxay qaadan doontaa celceliska shaqaalaha ku nool Yurub ugu yaraan 15.27 sano si aad u kasbato isla mushaharka Brozovic 1 bil gudahood.
Qiimaynta FIFA ee Marcelo Brozovic:
Isaga oo ka duwan ninka ay isku wadanka yihiin Josip Ilicic, Marcelo Brozovic wuxuu heystaa qiimeyn yar oo FIFA ah oo 82 ah inkasta oo rikoorkiisa cajiibka ah uu ku jiro oo ay ku jirto caawinta Croatia inay gaarto finalka Koobka Adduunka 2018. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira rajo ah in qiimeyntu ay horumarin doonto mustaqbalka.
Wuxuu u qalmaa qiimeyn sare Miyaadan aqbali doonin? Sawirka Sawirka: SoFIFA.
Ku saabsan Tattoos-yada Marcelo Brozovic:
Daraasad dhow oo lagu sameeyay jirka jirka Marcelo ayaa shaaca ka qaaday in dhererkiisa cajiibka ah ee 5 cagood 11 inji yahay in lagu dhameystiro tattoos gacantiisa bidix. Xiddiga qadka dhexe ayaa weli heli kara farsamooyin badan oo noocaas ah feeraha, qoorta, lugaha, dhabarka iyo caloosha.
Waxaa jira meelo ka badan oo ku filan oo loogu talagalay tattoos badan. Miyaadan oggolayn? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Wax ku saabsan Naaneyska Marcelo Brozovic:
Marcelo Brozovic ayaa lagu naaneeso "Yaxaaska" maxaa yeelay waxa uu ka soo saaray boodhadh Yaxaas oo dhif ah Luis Suarez ee Barcelona ka dhalisay laadka xorta ah kulankii ay la ciyaareen kooxda Inter Milan intii lagu gudajiray kulanka horyaalnimada La Liga. Marcelo wuxuu jecel yahay magaca naaneysta ah wuxuuna mar soo dhigay sawir isaga oo xiran dharka dharka yaxaaska intii lagu jiray Halloween.
Xaqiiqooyinka ku saabsan naaneyskiisa ku sawiran sawiro. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Ku saabsan Marcelo Brozovic Biladda Sharafta:
Sannadkii 2018, xubnaha qoyska Marcelo Brozovic waxay ku faani jireen inay ka mid yihiin qoysaska tirada yar ee ku nool Croatia ee arkay inay iyagu (Marcelo) helayaan Amarka Duke Branimir.
The Amarka Duke Branimir waxaa la siiyay dad kooban iyo Marcelo Brozovic ayaa ka mid ah. Dhibcaha: Pucuki
Bilada, oo loo yaqaanay Red kneza Branimira (luqada Croatian) waa billada 7-aad ee ugu muhiimsan ee ay bixiso Jamhuuriyadda Croatia. Mario Mandzukic iyo Luka Modrić dhowr ciyaartoy kale oo Croatian ah oo ku guuleystay.
Ku saabsan Marcelo Brozovic Diinta:
Sida saaxiibkiisa Luka Modric, Marcelo si cad uma uusan soo bandhigin saamaynta uu ku leeyahay arrimaha iimaanka. Si kastaba ha noqotee, qaddiyadaha ayaa si weyn ugu taageeraya inuu noqdo rumayste. Markii hore, waaliddiinta Marcelo Brozovic waxay ku barbareen guri Christian ah. Waxaa taas kasii daran, walaalkiis iyo wiilkiisa waxay ugu jawaabeen magaca Patrick iyo Rafael siday u kala horreeyaan.
Saldhigga Aqoonta ee Marcelo Brozovic:
Qeybta ugu dambeysa ee Xaqiiqooyinka Taariikhda Marcelo Brozovic, waxaad ku arki doontaa saldhiggiisa aqooneed ee Wiki. Tani waxay kaa caawineysaa inaad hesho macluumaadka ku saabsan isaga oo kooban oo hab fudud.
Marquin Brozovic Wiqu
Magaca buuxa: Marcelo Brozović (Ku dhawaaqida Croatian: [martsělo brǒːzoʋitɕ]
Taariikhda iyo Goobta Dhalashada: 16 Noofambar 1992 (Zagreb, Croatia)
Magacyada Waalidka: Ivan Brozović (Aabe) iyo Sanja Brozović (Hooyo)
Magacyada Walaalaha: Ema Brozovic (Sister) iyo Patrick Brozovic (Walaal)
Biladaha sharafta ee dalka: Amarka Duke Branimir
Age: 27 (sida ay ahayd Febraayo 2020)
Dhererka: 1.81 m (5 ft 11 gudaha)
Calaamadaha Zodiac: Scorpio
Shaqada: Kubad sameeyaha (khadka dhexe)
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay Akhriskayaga Taariikhda Dhalashada Marcelo Brozovic Plus Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Andrej Kramaric Story Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Mateo Kovacic Story Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-hadal aan la isku qorin
Ivan Perisic Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
Dejan Lovren Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Ivan Rakitic Childhood Story Sheekooyin Xaqiiqooyin Wada-hadal ah